जनताको सुविधालाई ध्यानमा राखेर एम्बुलेन्स किन्ने निर्णय गरेका हौँ - Bidur Khabar
विदुर खबर २०७५ असोज ११ गते ११:५२
वि.सं. २०२८ बैशाख ६ गते नौकुण्ड गा.पा. वडा नं. १ लाङबु, रसुवामा जन्मेका नुर्पू साङवो घले आमा नुर्पू याङजेन घले र पिता चुङचुङ घलेका एक्ला सुपुत्र हुन् । वि.सं. २०४६ मा नेपाली कांग्रेस पार्टीको साधारण सदस्य लिई राजनीति सुरू गरेका घले वि.सं. २०४८ नेपाली कांग्रेस पार्टी, रसुवामा क्रियाशील सदस्य हुन् । वि.सं. २०६५देखि दुई कार्यकाल यार्सा गाउँ कमिटीका सभापति भई वि.सं. २०७२ को १३ औं महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टी, रसुवाका महाधिवेशन प्रधिनिधिको भूमिका निर्वाह गरेको उनी हाल नौकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् । उनै घलेसँग गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश
नौकुण्ड गाउँपालिकाले गाडी खरिद गर्ने शीर्षकको बजेटले एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय गर्नु भएको रहेछ । के कुराले प्रभावित हुनु भएको छो ?
नौकुण्ड रसुवा जिल्लाको अन्य गाउँपालिकाभन्दा अलि पिछडिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले हामीलाई जसरी अमूल्य मत प्रदान गरी जनताको सेवा गर्ने मौका दिएको छ । यो अधिकार र मौका हामीले आफ्नो सुविधाका लागि प्रयोग गर्ने होइन । जनताको हितको निम्ति प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने सोच हो । नौकुण्ड गाउँपालिकाका जनता विरामी हुँदा सदरमुकामको अस्पातलसम्म पु¥याउन एउटा एम्बुलेस पनि छैन । जनताले विरामी पर्दा दुःख पाइरहेको छ । एम्बुलेसको कारण मेरो गाउँपालिकाको जनताको बीचैमा मृत्यु नहुन नपरोस् । तसर्थ जनताको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै आफू चढने गाडीको साटो जनताको लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।
एम्बुलेस खरिद गर्ने कार्य कहाँसम्म पुगेको छ र जनताले एम्बुलेस कहिले प्रयोग गर्न पाउँछ प्रमुख ज्यू ?
नौकुण्ड गाउँपालिकाले पौतिस चालिस लाखको जापानीज टोयाटा एम्बुलेस गाडी खरिद गर्ने गरी बजेट छुटाई सकेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व छुटका लागि निवेदन दिएको छ । मन्त्रालयले राजश्व छुटको सिफारिस उपलब्ध गर्ने वितिकै एम्बुलेन्स गाउँपालिकामा आउँछ ।
२०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा के कस्तो खालका विकासी योजनाहरुलाई प्रथामिकता दिएको छ ?
२०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा हामीले नौकुण्ड गाउँपालिकालाई शिक्षा, सडक, स्वास्थ्य र पर्यटन विकासका योजनाहरुलाई प्रथामिकता दिएको छ । गाउँपालिका भित्रका बालबालिका र विद्यालयमा गुणस्तर शिक्षा र व्यवस्थित शिक्षा सुधारका लागि अलि बढी बजेट प्रथामिकतामा राखेका छाँै । त्यसपछि गाउँपालिकामा सडक सञ्जालको लागि ट्रयाक खोल्ने काम भएपछि वर्षात्का समयमा सवारी साधन सञ्चालन हुन नसकिने भएको हुँदा सडक मर्मत र पुल नभएको स्थानमा पुल निर्माण गर्ने कामलाई पनि अलि बढी बजेटले प्रथामिकता दिएको छ । यस पालि पर्चाङको पाङगु खोलामा पक्की पुल निर्माणको लागि ५ करोडको टेन्डर हँुदैछ ।
२०७५÷०७६ को लागि गाउँसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमको के के काम भईरहेको छ ? वा सुरुवात भईरहेको छ ?
गत वर्षमा हामीले प्राविधिक इस्टिमेड विना जसरी योजनाहरू कार्यन्वयन गरियो । प्राविधिक इस्टिमेड विनै योजना सम्पन्न गर्दा धेरै प्राविधिक समस्यहरु बोक्नु प¥र्यो हामीले । तसर्थ हामीले गत वर्षको जस्तो गल्ती नगर्ने गरी यस वर्ष हामीले सव इन्जिनियर र सिभिल इन्जिनियर नै राखेर गाउँपालिकाको ६ वटै वडामा पारित भएका योजनाहरूको प्राविधिक इस्टिमेट तयार गर्ने कामहरु भईरहेको छ । दशैँ अगाडीसम्ममा प्राविधिकहरूले प्राविधिक इस्टिमेट गाउँपालिकामा बुझाइसकेपछि दशैँ तिहारपछि योजना निर्माण सुरू हुन्छ ।
दशैँ तिहारपछि योजना निर्माण सुरू गर्दा समयमा नै योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्भाव छ त प्रमुख ज्यू ?
हाम्रा योजनाहरू धेरै ठुला ठुला हुँदैन । यसलाई छ, सात महिना समय भए पुग्छ । डोजर जेसीभी भएका निकायहरूसँग समन्वयन गरी एउटा लोकिलडाँडा, अर्को भोर्लेबाट डोजर लगाएर दशै तिहार अगाडि नौकुण्ड जाने सडकहरू सफा मर्मत गरी सक्ने छ । यस वर्षको सवै योजना तथा कामहरू अर्को बैशाखसम्ममा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गरी सक्ने योजना लिएको छु ।
नौकुण्ड अहिले पनि सहज रुपमा सवारी सधान सुचारु भईरहेको छैन तर २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा हेर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रलाई बढी बजेट विनियोजित गरेको देखिन्छ किन ?
शिक्षा, स्वास्थ्य विना कुनै पनि विकास असम्भव छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य विना राजनीति र विकास गर्न कठिनाई हुन्छ । तसर्थ हामीले सडक नै नबनाउने भनेको छैन । सडक मर्मत र सडक जोड्ने खोलामा पक्की पुल निर्माण गर्ने बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर हाम्रो गाउँपालिकाको बालबालिकाले गुणस्तर शिक्षा र पुर्ण भौतिक यूक्त विद्यालय निर्माणका लागि अलि बढी शिक्षालाई प्रथामिकता दिएका छौँ । यो बजेटले नौकुण्डका विद्यार्थीलाई लाभान्वित भई गुणस्तर शिक्षा प्राप्त हुने विश्वास गरेका छौँ ।
नौ कुण्ड गाउँपालिको २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत पहँुचबाट बन्चित टोल बस्तीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समन्वय वत्ती जडान गने योजना देखियो हालसम्म पनि नौ कुण्डको कुन कुन स्थान हालसम्म बत्ती छैन ?
नौकुण्ड गाउँपालिकाको धेरै जस्तो गाउँ ठाँउमा सडक, विद्युत सेवा पुगिसकेको छ । तर नौकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. २ यार्साको गङबार र सरमथलीको माथिल्लो भाग लामङमा हालसम्म पनि बत्ती पुकेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग कुरा भईसकेको र बजेटको व्यवस्था भईसकेको हुँदा केही समय भित्र नै ती क्षेत्रमा विद्युत जडान गर्ने काम अगाडि बढेको छ ।
नौकुण्ड गाउँपालिकमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउन कला संस्कृति संग्राहलय, पार्क निर्माण गरिने नीति कार्यक्रम पारित गरेको देखियो । यो योजना कहाँ र यसबाट पर्यटन विकास गर्न सम्भावना देख्नु हुन्छ ?
नौकुण्ड गाउँपालिका जाँदा कहाँ र कुन ठाउँ जाने भन्ने सोच बाह्य मान्छे तथा पर्यटनलाई हुन सकिन्छ । त्यसैले बाह्य मान्छे तथा पर्यटनलाई नौकुण्ड गाउँपालिका आउदा घुम्ने र मन रमाउने कुरालाई ध्यानमा राखी नौकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं. तीनमा एउटा पुरानो स्थानीय गुम्बा छ । त्यही गुम्बालाई सुधार तथा मर्मत गरी तामाङहरू संस्कृति भेषभूषा, खेती औजारसमेत झल्कने म्युजियम नौकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं. एक र तीनको बीचमा एउटा अति सुन्दर ठाँउ फलांखुखोला डाँडा छ त्यसलाई नै पिकनिक आउने पार्क निर्माण गरिने योजना बनाएको छ । यो योजनाले पर्यटन विकासमा केही टेवा पुग्छ भन्ने हाम्रो सोच हो ।
प्रमुख र उपप्रमुखहरू मिल्ने गाउँपालिका र नमिल्ने गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन र जनताको काममा के फरक भिन्नता हँुदोरहेछ तपाईको अनुभावमा ?
यही रसुवाको केही गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई मैले हेरँे प्रमुखको फोन उपप्रमुखले नउठाउने रहेछ, उपप्रमुखको फोन प्रमुखले नउठाउने रहेछ । बोलीचाली पनि राम्रो नभएको समेत भेटिए । प्रमुख र उपप्रमुखको विवादले गाउँसभा समेत सारेको कुरा पनि सुनियो । किन यस्तो भएको हो भने गाउँपालिकाको बजेट योजना आफु अनुकुल चलाउन नपाउदा विवाद उत्पन्न भएको त हो । प्रमुख र उपप्रमुख जो होस स्वार्थी छैन भने मिलेर काम गर्छ । प्रमुख र उपप्रमुखमा स्वार्थी छ भने मिल्दैन । आफुलाई केही हुनु पर्छ पाउनु पर्छ भन्ने स्वार्थी छोडेर सही योजना हो भने जसले ल्याएपनि आफ्नै गाउँपालिकाभित्र काम हुने हो । जनता र गाउँपालिक कै विकास र हित हुने हो किन विवाद र किन नमिल्ने ? मेरो गाउँपालिकाको हकमा भन्ने हो भने हाम्रो उपप्रमुख सृजना लामा जि हो यहाँलाई पनि गाउँपालिकाको जनताको विकासी बजेटबाट केही लिनु दिनु नै छैन र मलाई पनि केही लोप छैन । त्यसैले हामी मिलेर काम गरिरहेको छ । जहाँ प्रमुख र उपप्रमुख मिल्छ त्यहाँ कार्य सम्पादन राम्रो हुन्छ । जहाँ प्रमुख र उपप्रमुख मिलिरहेको छैन त्यहाँ कार्य सम्पादन गाह्रो भईरहेको छ ।
गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाले धुञ्चे—गोसाईकुण्ड केबुरकार निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजना गरि सकेको अवस्थामा नौकुण्डले पनि गोसाईकुण्ड केबलकार आयोजना संचालनका लागि बजेट छुटाएको देखिन्छ । यसको केही औचित्य छ ?
गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाले पहिला नै गर्यो होला त्यो स्वागत योग्य छ । धुन्चेबाट गोसाईकुण्ड पुग्न कति खर्च लाग्छ । जसले बिजनेस गर्छ उसले पैसाको हिसाब किताब गर्छ । गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाबाट केबलकार बनाउन सम्भब छ कम खर्चमा बन्छ भने गोसाईकुण्डले बनाउछ । गोसाईकुण्डबाट बढि खर्च लाग्छ भने नौकुण्ड गाउँपालिकाबाट बन्छ । यसमा दुई मत छैन् । फेरि दुप्चेश्वरबाट पनि बनाउने भन्ने कुरा आईरहेको छ । नौकुण्डबाट गोसाईकुण्डसम्म ७ कि.मि., धुन्चेबाट गोसाईकुण्डसम्म ९ कि.मि. र दुप्चेश्वरीबाट गोसाईकुण्डसम्म १३ कि.मि. लाग्छ । लगानीकर्ताले कहाँबाट नजिक हुन्छ भनेर हेरिराखेको हुन्छ । कालिकास्थानबाट धुन्चे आउन डेढ घण्टा लाग्छ भने कालिकास्थानबाट सिङ्बन्दीको माथि छोदाङ पुग्न आधा घण्टा लाग्छ । नौकुण्ड गाउँपालिकाका नागरिकबाट गोसाईकुण्डसम्म केबलकार बनाउनुपर्छ भनि प्रस्ताब आएपछि गोसाईकुण्ड गाउँपालिका बाट पनि केबुलकार बनाउने भनिएको छ । के होला भन्ने सबैतिर छलफल गर्दा गोसाईकुण्डबाट सफल भएन भने नौकुण्डबाट हुन्छ कि, आखिर रसुवाको बिकास नै गर्ने हो भनेर अघि बढेका हौ । हाम्रो कार्यकालमा नै केबलकार बन्ने होईन हामीले प्रस्ताब गर्ने हो । जताबाट भएपनि गोसाईकुण्ड केबलकार रसुवाबाट बन्नुपर्छ भन्ने हो । भोलि नौकुण्डबाट बनेन भने गोसाईकुण्डलाई सहयोग गछौँ । गोसाईकुण्डबाट भएन भने नौकुण्डलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । तपाईको गाउँपालिकाभित्र जनताको आवास पुनः निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?
धेरैले किस्ता रकम लिइसकेका छन् । तर एउटा समस्य झै के हो भने नौकुण्ड गाउँपालिकाका जनताको आवास पुनर्निर्माणका लाभान्वित घरधुरीको किस्ता रकम बितरण गर्ने जिम्मा कालिकास्थानमा रहेको आईसीएफसि बैकले लिए पनि सो बैकले जनतालाई किस्ता रकम उपलब्ध गराउन ढिला गर्दा किस्ता रकम लिन नागरिकहरुलाई समस्या भएको छ । जोखिममा रहेका केही बस्ति स्थानान्तरणको लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । नौकुण्डमा पुननिर्माणमा खासै अहिले करिब ९७ प्रतिशत जति घर निर्माण भईसकेको छ ।
कुनै काममा कमीकमजोर र अप्ठायारो भईरहेको छ भने म तपाईहरुको साथमा छु भन्दै नौकुण्ड गाउँपालिकाका जनतालाई अनुरोध गर्न चहान्छु कि मलाई सुधार गर्ने सल्लाह सुझाव के छ ? दिनु होला र कसैले हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन चाहानु भएको छ वा टिकटिप्पाणी केही छ भने मेरो २४ सै घण्टा फोन आन हुने छ फोन गर्न सकिने कुरा जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
साभार : सप्तकुण्ड साप्ताहिक